Shiinaha Silicone Rubber barkin Waayo Card-samaynta Laminator saarayaasha iyo alaab | Cayce May
Barkinta siligga ah ee loo yaqaan 'Silicone barkin' oo loogu talagalay kaararka wax lagu nadiifiyo ayaa loogu talagalay oo ay soo saartay shirkadeena oo u heellan taageeridda warshadaha kaararka sameynta iyadoo loo eegayo baahida suuqa, oo ku habboon dhammaan noocyada kaararka bangiga, kaararka deynta iyo wax soo saarka kaararka casriga ah.
Barkinta caagga ah ee silikoon ee ay soo saarto shirkadayada waxay isticmaashaa laba nooc oo qaab dhismeed ah, taasi waa KXM4213, laba dhinac oo caag ah oo silikoon ah oo leh qaab, dhar maro adag oo lakabka dhexe ah. KXM4233, laba dhinac ayaa laga dareemay, caag silikoon lakab ah.
KXM4213 (Labada dhinacba caag silikoon ah oo leh hannaan, dhar marooyin dhexdhexaad ah)
Wax ceyriin oo laga keenay Jarmalka, heerkulka sare u adkaysta, dabacsanaan wanaagsan
Kuleylka kuleylka kuleylka leh, Kuleylka si isku mid ah ayaa loo qaybiyey
Resisitis cadaadis sarreeya oo wanaagsan.
Xalka u adkaysta, gabowga u adkaysta, daxalka u adkaysta.
KXM4233 (labada dhinacba waa dareemeen, caag silikoon dhexe)
Wax ceyriinku wuxuu noqon karaa kuleyl adkaysi, cadaadis sarreeya oo adkaysi leh.
Nuugista biyaha wanaagsan, waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa xumbada iyo sumadda kaarka dusha.
Isugeyn wanaagsan, dheeree inta uu nool yahay guddiga kululaynta iyo guddiga laminating.
Shayga KXM4213 KXM4233
Qalabka dusha sare Caag silikoon leh qaab Kuleylka u adkaysta dareemayaasha
Qalabka dhexe Maro adag Caag silikoon madow
Adag xeebta A 55 ± 5 50 ± 5
Xoog siligga (N / mm) 80 60
Koollo (N / mm) 4.5 4.5
Caabbinta heerkulka ℃ 230 200
Midab Caddaan cad
Astaamahiisa waa sida soo socota:
(Qaab laba-geesood ah oo silikoon ah oo dhar fiber galaas dhexe ah)
• Badeecaddu waxay aqbashaa alaabada ceyriin ee laga keeno Jarmalka, iska caabinta heerkulka sare iyo dabacsanaanta wanaagsan.
• Qabsashada kuleylka degdega ah iyo qeybinta kuleylka oo isku mid ah ayaa si weyn u kordhin kara wax soo saarka alaabta inta lagu gudajiro dahaadhka.
• Waxay leedahay caabbinta cadaadiska wanaagsan, cillad la'aan, lagu kalsoonaan karo oo waara.
• Waxay kaa caawineysaa baabi'inta godadka iyo miraha wanaagsan ee dusha sare iyo hagaajinta tayada wax soo saarka.
• Xallinta caabbinta, iska caabinta gabowga, u adkaysiga daxalka, sun aan sun lahayn iyo ur la'aan, iyadoo la raacayo shuruudaha ilaalinta deegaanka
• Qalabka ceyriinka ah ee sheyga ayaa u adkeysan kara heerkulka sare iyo cadaadiska, la kulmi kara shuruudaha tikniyoolajiyadeed ee sameynta kaarka iyo laalaynta, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa kaararka gaar u sameynta.
• Qulqulka kuleylka degdega ah iyo isku midka ah, hagaajinta waxtarka wax soo saarka iyo keydinta tamarta.
• Waxay leedahay waxqabadka nuugista biyaha wanaagsan, waxay si wax ku ool ah u baabi'in kartaa goobooyinka iyo calaamadaha dusha sare ee kaarka, waxayna si weyn u hagaajineysaa heerka u-qalmitaanka alaabta.
• Waxay leedahay wax qabad wanaagsan, waxay ka fogaataa calaamadaha xoqan ee ay keeneen xiriirka adag ee u dhexeeya saxanka kululaynta iyo laminate-ka, waxayna sii dheereyneysaa nolosha adeegga saxanka kululaynta iyo kan laminate-ka.
• Si sahlan loo isticmaalo, keydinta saacadaha beddelka ah.
Hore: Barkinta Silicone Rubber ee Saxaafadda kulul
Xiga: Sheet Silicone Rubber Waayo, Laminator Solar
Xuub PCB Rubber dahaarka Waayo, Machine Press kulul